အီကာဒီ ကို ခေါ်ယူပြီး ၊ လက်ရှိ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ၀ုန်ဒုန်းကျဲ ပြသွားတဲ့ #PSG - SPORTS MYANMAR
အီကာဒီ ကို ခေါ်ယူပြီး ၊ လက်ရှိ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ၀ုန်ဒုန်းကျဲ ပြသွားတဲ့ #PSG
လက်ရှိ အပြောင်းအရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခါစ မှာ ကျနော်တို့ ထင်ထားခဲ့တာက PSG ဟာ ဘာပေ နဲ့ နေမာ ကို ဆက်ထိန်းဖို့ မလွယ်တော့ဘူး ၊ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ ယူဆထားခဲ့ကြတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ နေမာ နဲ့ ကလပ် အသင်းအကြား ပြသနာတွေ မျိုးစုံ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်လာနေတာကြောင့် ၊ အဓိက ကစားသမား တစ်ယောက်ယောက်တော့ ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆနေဆဲ မှာပဲ PSG ဟာ အင်တာမီလန် မှာ နေရာ မရပဲ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်စစ်မှုး အီကာဒီ ကို ခေါ်ပြလိုက်တဲ့ အပြင် ၊ အခြား ကစားသမား9ယောက် အထိပါ ခေါ်ယူ အားဖြည့် သွားခဲ့ပါတယ်။
အီကာဒီ အတွက်တော့ အပြောင်းအရွှေ့ နောက်ဆုံး အချိန်မှာ PSG က ခေါ်ယူဖို့ ပေါ်ထွက်လာတာက ၊ မြက်ခင်းစိမ်းပေါ် အခြေပြန်ချခွင့် ရဖို့ ဘောလုံး နတ်ဘုရားတွေက ဖန်တီးပေးလိုက်တာလား လို့တောင် ထင်မှတ်ရလောက်အောင် အံ့အားသင့်ဖို့ ကောင်းနေခဲ့ ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ် ကလပ်အသင်းကမှ သံသယ မရှိပေမယ့် ၊ သူ့ရဲ့ ဇနီး/အေးဂျင့် ဖြစ်သူ ၀မ်ဒါ ကိုတော့ ထိပ်သီး ကလပ် အသင်းက အရာရှိ တော်တော်များများက ရှောင်ရှားချင်ကြပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပဲ အီကာဒီ လို တိုက်စစ်မှုးကို လိုလိုချင်ချင် နဲ့ ခေါ်ယူမယ့် ကလပ်မျိုး ပေါ်ထွက်ခဲ့ခြင်း မရှိသလို ၊ နာပိုလီ ၊ ဂျူဗီ နဲ့ မိုနာကို တို့က ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည့်တိုင်အောင် အကောင်အထည် ပေါ်လာခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
အဲဒီ ကလပ်တွေဟာ အီကာဒီ နဲ့ အင်တာမီလန် တို့အကြားက ပြသနာကို ခုတုံးလုပ်ကာ အပြောင်းအရွှေ့ ပမာဏကို ထိုက်သင့်သလောက် ပေးချေလိုခြင်း မရှိတာကြောင့်ရော ၊ ကစားသမား က လိုချင်တဲ့ လစာ ပမာဏမျိုး အထိ ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒမရှိတာရောကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့က ရုပ်လုံး မပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အီကာဒီဟာ သူ့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် နဲ့ အတူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံး သမား တစ်ယောက်ကို လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းခွင့် မပေးတဲ့ အချက်ကို ဆွဲကိုင်ကာ အင်တာမီလန်ကို တရားစွဲဆိုဖို့ အထိ ပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အပြောင်းအရွှေ့ ပိတ်သိမ်းခါနီးလို့ ၊ သူ့ အတွက် အသင်းပြောင်းခွင့် နည်းပါးသွားပြီလို့ ယူဆနေတာကြောင့် အခုလို တရားစွဲမယ့် သတင်းတွေ ပေါ်ထွက် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချိန်ကိုက်သား ဆိုသလိုပဲ PSG ကလဲ တိုက်စစ်မှုးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘာပေ ၊ ကာဗာနီ တို့ ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကိုယ်စီ ရရှိသွားချိန်မှာ ၊ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်အင်အားကို ဖြည့်တင်းဖို့ ချက်ခြင်း အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ အီကာဒီ ကို ခေါ်ယူဖို့ စတင်လှုပ်ရှားလိုက်တာပါ။
အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်က အရမ်းကို ကန့်သတ်လွန်းသွားတာကြောင့် PSG က ဈေးဆစ်မှုတွေတောင် ကောင်းကောင်း မပြုလုပ်ခဲ့သလို ၊ အင်တာမီလန် လိုချင်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပမာဏရော ၊ ကစားသမား လိုချင်တဲ့ လစာ ပမာဏမျိုးပါ တန်းပေးပြီး ခေါ်ယူသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အီကာဒီ ကိုယ်တိုင် ကလဲ အင်တာမီလန် ကို တရားစွဲမယ့် အခြေအနေ ကနေ 2022 ခုနှစ် အထိတောင် စာချုပ် သက်တမ်းတိုးပေးလိုက်ပြီးမှတောင် PSG ထံ အငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
PSG ဟာ အီကာဒီ ကို တစ်ရာသီ အငှားခေါ်ယူခ အဖြစ် ယူရို5သန်း ပေးချေရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အပြီးသတ် ခေါ်ယူမယ် ဆိုပါက ယူရို 65 သန်း ထပ်မံ ပေးချေသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမား ရဲ့ လစာ ကို တစ်နှစ် လုပ်ခ အဖြစ် ယူရို 8 သန်း အထိ ပေးသွားမှာပါ။
အကယ်၍ PSG က အီကာဒီ ကို အပြီးသတ် ခေါ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ပါကာ ၊ လက်ရှိ ပေးချေထားတဲ့ လစာ ယူရို 8 သန်း အပြင် နောက်ထပ် ဘောနပ် ခံစားခွင့် ယူရို2သန်းပါ ထပ်မံ ရရှိဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီကာဒီ ရဲ့ လစာ လာမယ့်ရာသီမှာ ယူရို 10 သန်း အထိ ဖြစ်သွားနိုင်သလို ၊ PSG က မခေါ်ယူခဲ့လို့ အင်တာမီလန် ကို ပြန်သွားခဲ့ရင်တော့ အင်တာက သူ့ကို ယူရို5သန်း နဲ့သာ ပေးချေဖို့ စာချုပ်မှာ ထည့်သွင်း ထားခဲ့ပါတယ်။
သူ့ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဟာ နည်းနည်းတော့ ရှုပ်ထွေးတယ် ဆိုပေမယ့် ၊ အီကာဒီ အတွက်တော့ နောက်ဆုံး အခိုက်အတန့်မှာ ထွက်ပေါ် တစ်ခု တွေ့သွားခဲ့ပါပြီ။ အင်တာမီလန် မှာ ချုပ်တည်းခဲ့ရတဲ့ ဒေါသတွေကိုလဲ PSG မှာ ဂိုးတွေ သွင်းပြရင်း ပေါက်ကွဲပြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် အာဂျင်တီးနား သားကြီးရေ………..
PSG ဟာ အီကာဒီကို ခေါ်ယူ အပြီးမှာတော့ ဒီရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ အပြောင်းအရွှေ့ အသုံးစာရိတ် ယူရို သန်း 100 နီးပါး သုံးစွဲ သွားခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ကစားသမားသစ် 10 ယောက် အထိ ခေါ်ယူ အားဖြည့် သွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ကစားသမားတွေ ကတော့ –
1. ဟာရဲရား (ယူနိုက်တက်)
2. ဂူယီ (အဲဗာတန်)
3. ဆာရာဘီးယား (ဆီဗီလား)
4. ရီကို (ဆီဗီလား)
5. နာဗက် (ရီးရဲ)
6. အီကာဒီ (အင်တာ)
7. ဒီရာလို (ဒေါ့မွန်)
8. ဆိုင်မွန် (ဘာစီလိုနာ)
9. ဘိတ်ကာ (အေဂျက်)
10. ဘူလ်ကာ (ချဲဆီး) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အီကာဒီ ကို ချေါယူပွီး ၊ လကျရှိ အပွောငျးအရှမှေ့ာ ၀ုနျဒုနျးကြဲ ပွသှားတဲ့ #PSG
လကျရှိ အပွောငျးအရှေ့ ဖှငျ့လှဈခါစ မှာ ကနြျောတို့ ထငျထားခဲ့တာက PSG ဟာ ဘာပေ နဲ့ နမော ကို ဆကျထိနျးဖို့ မလှယျတော့ဘူး ၊ တဈယောကျယောကျတော့ ဆုံးရှုံးရတော့မယျလို့ ယူဆထားခဲ့ကွတာပါ။ နောကျပိုငျးမှာ နမော နဲ့ ကလပျ အသငျးအကွား ပွသနာတှေ မြိုးစုံ ပျေါပေါကျလာခဲ့ပွီး ၊ ဘာစီလိုနာ နဲ့ အပွောငျးအရှေ့ ဆကျတိုကျ ထှကျပျေါလာနတောကွောငျ့ ၊ အဓိက ကစားသမား တဈယောကျယောကျတော့ ဆုံးရှုံးရလိမျ့မယျလို့ ယူဆနဆေဲ မှာပဲ PSG ဟာ အငျတာမီလနျ မှာ နရော မရပဲ ဖွဈနတေဲ့ တိုကျစဈမှုး အီကာဒီ ကို ချေါပွလိုကျတဲ့ အပွငျ ၊ အခွား ကစားသမား9ယောကျ အထိပါ ချေါယူ အားဖွညျ့ သှားခဲ့ပါတယျ။
အီကာဒီ အတှကျတော့ အပွောငျးအရှေ့ နောကျဆုံး အခြိနျမှာ PSG က ချေါယူဖို့ ပျေါထှကျလာတာက ၊ မွကျခငျးစိမျးပျေါ အခွပွေနျခခြှငျ့ ရဖို့ ဘောလုံး နတျဘုရားတှကေ ဖနျတီးပေးလိုကျတာလား လို့တောငျ ထငျမှတျရလောကျအောငျ အံ့အားသငျ့ဖို့ ကောငျးနခေဲ့ ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ခွစှေမျး နဲ့ ပတျသကျလို့ ဘယျ ကလပျအသငျးကမှ သံသယ မရှိပမေယျ့ ၊ သူ့ရဲ့ ဇနီး/အေးဂငျြ့ ဖွဈသူ ၀မျဒါ ကိုတော့ ထိပျသီး ကလပျ အသငျးက အရာရှိ တျောတျောမြားမြားက ရှောငျရှားခငျြကွပါတယျ။ အဲဒီ အကွောငျးပွခကျြကွောငျ့ပဲ အီကာဒီ လို တိုကျစဈမှုးကို လိုလိုခငျြခငျြ နဲ့ ချေါယူမယျ့ ကလပျမြိုး ပျေါထှကျခဲ့ခွငျး မရှိသလို ၊ နာပိုလီ ၊ ဂြူဗီ နဲ့ မိုနာကို တို့က ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားခဲ့သညျ့တိုငျအောငျ အကောငျအထညျ ပျေါလာခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
အဲဒီ ကလပျတှဟော အီကာဒီ နဲ့ အငျတာမီလနျ တို့အကွားက ပွသနာကို ခုတုံးလုပျကာ အပွောငျးအရှေ့ ပမာဏကို ထိုကျသငျ့သလောကျ ပေးခလြေိုခွငျး မရှိတာကွောငျ့ရော ၊ ကစားသမား က လိုခငျြတဲ့ လစာ ပမာဏမြိုး အထိ ပေးခငျြတဲ့ ဆန်ဒမရှိတာရောကွောငျ့ အပွောငျးအရှကေ့ ရုပျလုံး မပျေါလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာတော့ အီကာဒီဟာ သူ့ရဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ဆုံးရှုံးတယျ ဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြ နဲ့ အတူ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဘောလုံး သမား တဈယောကျကို လကေ့ငျြ့ခနျး ဆငျးခှငျ့ မပေးတဲ့ အခကျြကို ဆှဲကိုငျကာ အငျတာမီလနျကို တရားစှဲဆိုဖို့ အထိ ပွငျဆငျလာခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အပွောငျးအရှေ့ ပိတျသိမျးခါနီးလို့ ၊ သူ့ အတှကျ အသငျးပွောငျးခှငျ့ နညျးပါးသှားပွီလို့ ယူဆနတောကွောငျ့ အခုလို တရားစှဲမယျ့ သတငျးတှေ ပျေါထှကျ လာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ခြိနျကိုကျသား ဆိုသလိုပဲ PSG ကလဲ တိုကျစဈမှုးတှေ ဖွဈတဲ့ ဘာပေ ၊ ကာဗာနီ တို့ ဒဏျရာ ပွသနာ ကိုယျစီ ရရှိသှားခြိနျမှာ ၊ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈအငျအားကို ဖွညျ့တငျးဖို့ ခကျြခွငျး အကွောငျးဖနျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ အခြိနျမှာပဲ အီကာဒီ ကို ချေါယူဖို့ စတငျလှုပျရှားလိုကျတာပါ။
အပွောငျးအရှအေ့တှကျ ဆှေးနှေးဖို့ အခြိနျက အရမျးကို ကနျ့သတျလှနျးသှားတာကွောငျ့ PSG က စြေးဆဈမှုတှတေောငျ ကောငျးကောငျး မပွုလုပျခဲ့သလို ၊ အငျတာမီလနျ လိုခငျြတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပမာဏရော ၊ ကစားသမား လိုခငျြတဲ့ လစာ ပမာဏမြိုးပါ တနျးပေးပွီး ချေါယူသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အီကာဒီ ကိုယျတိုငျ ကလဲ အငျတာမီလနျ ကို တရားစှဲမယျ့ အခွအေနေ ကနေ 2022 ခုနှဈ အထိတောငျ စာခြုပျ သကျတမျးတိုးပေးလိုကျပွီးမှတောငျ PSG ထံ အငှားနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
PSG ဟာ အီကာဒီ ကို တဈရာသီ အငှားချေါယူခ အဖွဈ ယူရို5သနျး ပေးခရြေမှာ ဖွဈပွီး ၊ အပွီးသတျ ချေါယူမယျ ဆိုပါက ယူရို 65 သနျး ထပျမံ ပေးခသြှေားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကစားသမား ရဲ့ လစာ ကို တဈနှဈ လုပျခ အဖွဈ ယူရို 8 သနျး အထိ ပေးသှားမှာပါ။
အကယျ၍ PSG က အီကာဒီ ကို အပွီးသတျ ချေါယူဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခမြှတျခဲ့ပါကာ ၊ လကျရှိ ပေးခထြေားတဲ့ လစာ ယူရို 8 သနျး အပွငျ နောကျထပျ ဘောနပျ ခံစားခှငျ့ ယူရို2သနျးပါ ထပျမံ ရရှိဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အီကာဒီ ရဲ့ လစာ လာမယျ့ရာသီမှာ ယူရို 10 သနျး အထိ ဖွဈသှားနိုငျသလို ၊ PSG က မချေါယူခဲ့လို့ အငျတာမီလနျ ကို ပွနျသှားခဲ့ရငျတော့ အငျတာက သူ့ကို ယူရို5သနျး နဲ့သာ ပေးခဖြေို့ စာခြုပျမှာ ထညျ့သှငျး ထားခဲ့ပါတယျ။
သူ့ ရဲ့ အပွောငျးအရှဟေ့ာ နညျးနညျးတော့ ရှုပျထှေးတယျ ဆိုပမေယျ့ ၊ အီကာဒီ အတှကျတော့ နောကျဆုံး အခိုကျအတနျ့မှာ ထှကျပျေါ တဈခု တှသှေ့ားခဲ့ပါပွီ။ အငျတာမီလနျ မှာ ခြုပျတညျးခဲ့ရတဲ့ ဒေါသတှကေိုလဲ PSG မှာ ဂိုးတှေ သှငျးပွရငျး ပေါကျကှဲပွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ အာဂငျြတီးနား သားကွီးရေ………..
PSG ဟာ အီကာဒီကို ချေါယူ အပွီးမှာတော့ ဒီရာသီ အပွောငျးအရှမှေ့ာ အပွောငျးအရှေ့ အသုံးစာရိတျ ယူရို သနျး 100 နီးပါး သုံးစှဲ သှားခဲ့ပွီး စုစုပေါငျး ကစားသမားသဈ 10 ယောကျ အထိ ချေါယူ အားဖွညျ့ သှားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ ကစားသမားတှေ ကတော့ –
1. ဟာရဲရား (ယူနိုကျတကျ)
2. ဂူယီ (အဲဗာတနျ)
4. ရီကို (ဆီဗီလား)
5. နာဗကျ (ရီးရဲ)
6. အီကာဒီ (အငျတာ)
7. ဒီရာလို (ဒေါ့မှနျ)
8. ဆိုငျမှနျ (ဘာစီလိုနာ)
9. ဘိတျကာ (အဂေကျြ)
10. ဘူလျကာ (ခြဲဆီး) တို့ ဖွဈပါတယျ။